28-ka december maalin MURUGO iyo GOCOSHO badan! - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > 28-ka december maalin MURUGO iyo GOCOSHO badan!
December 28, 2016 December 28, 2016 admin761
Maxkamadihii waxay waqti gaaban gacanta ku dhigeen Magaalada Muqdisha (Unugga Dhibka Soomaaliya), waxayna billaabeen is ballaarin iyo dhulfidsi, Soomaaliyana waxay soo jiidatay indhaha dunida, waxaa billowday dhaqdhaqaaq xooggan. Waxa is la dhawaaqay caalamkii halmara oo yiri: dawladda iyo maxkamaduhu waa inay wadahadal furan, ka dib waxa furmay shirkii Khartoum 15kii July 2006-dii, wuxuu ku soo dhammaaday, in la joojiyo colaadaha iyo af dagaalka, la isna aqoonsado wada hadalkana la sii wado, balse, nasiibdarro wada hadalkii u dhexeeyey Maxkamadaha iyo dawladda Empagathi wuxuu ku soo afjarmay guuldarro, waxaana lagu ka la dareeray shirkii ugu dambeeyey, ee ka dhacay magaalada Khartoum 30-kii October, ee dabayaaqadii is la sanadkii 2006-dii, waxaana ka dib billowday hub urursi iyo qoryo isu diyaarsi. Maalintaas Maxkamaduhu waxay ka talinayeen ugu yaraan 7 gobal, saddax arrimood way la gudbooneed, inay mid ku dhaqaaqaan oo kala ah:
1) Dalka waxaa jirta Dawlad Federal ah, sidaa darteed, inay ku dhawaaqaan maamul gobaleed.
2) Kan xiga inay dawladda la galaan wadahadal dhab ah, oon ku xirnayn shuruud, kana qaybqaataan awoodqaybsiga dalka.
3) Waa tan ugu danbeysee waxay ahayd: inay dhul ballaarsiga ku daraan hoyga dawladda Empagathi ee Baydhabo, oo ku qabsadaan dagaal iyo cudud military, iyana waxay suuragal ahayd wixii ka horeeyey bishii 7-aad ee July, wixii ka dambeeyeyse waqtiga wadaaddada waa ka ku soo yaraaday.
Sawirro: Madaxweyne Xaaf oo la kulmay M. Keating